Fantatrao ve: Ahoana ny fikajiana ny Masonkarena
mercredi, 12 février 2020 11:21
Ny mpandraharaha rehetra, na mpamboly, na mpanao asa tanana, na mpivarotra, na indostrialy, na miasa mamarotra fahaizana, conseil et service, dia ny hitady tombony no tanjona.
Tsy maintsy fantarina tsara anefa ny masonkarena, na ny vola laniana sy ny fotoana rehetra nampiasaina na namokarana ilay entana, na vokatra, na fahaiza amidy, mba ahalalana ny vidiny na sarany amarotana azy, mba tsy ho fatiantoka.
Tombom-barotra = Vidin'ny entana - Masonkarena
Ohatra: Fambolem-bary amin'ny velaran-tany 1ha
Kajiana avokoa izany ireo vola lany sy fotoana nentina namboly ilay vary
1- Akora ilaina:
Matetika ny vary azo teo aloha no anajanonana atao masomboly, nefa izay no maha kely ny vokatra miakatra, ary misy karazam-bary tsy azo volena ny vary vokatra azo.
Tombanana ho 100 000ariary
Ny tantsaha matetika tsy manisa ny vidin'ny zezik'omby, nefa tokony ampidiriny anaty kaonty izay, fa ny zezi-bazaha na izay vola laniny ihany no isainy.
Tombanana 15 000ariary
- Fanafody biby: 24 000ariary ny litatra, mahalany 2l = 48 000ariary
- Fanamboarana ny tata-drano sy ny fefiloha
- Mpiasa tany
- Mpitaona ketsa
- Fijinjana - Fivelesana sy mikororoka vary
* Asa tany = 5 000 ariary/isan'andro x 5 lahy x 7 andro = 175 000 ariary
* Mpanetsa = 4 000 ariary/isan'andro x 10 vavy x 3 andro = 120 000 ariary
* Fihavana sy fikarakarana = 5 000 ariary x 10 andro = 50 000 ariary
* Fijinjana vary = 150 000 ariary
* Fivelesana vary = 5 000 ariary x 5 mpiasa x 3 andro = 75 000 ariary
Sakafon'ny mpiasa sy kafé: 2 000 ariary x 30 andro = 60 000 ariary
3 - Fitaovana
- Hersa - Ragiragy
Matetika dia tsy kajian'ny mpamboly ireo fampiasana fitaovana ireo, nefa nialana vola.
Azo atao ny mikajy azy, ka heverina fa simba sy tsy maintsy avaozina ireo fitaovana ireo afaka 5 taona, izany hoe zaraina 5 izany ny vidin'ireo fitaovana na omby ireo, dia izay no vola lany isan-taona na isaky ny taom-pamokarana iray, io ilay antsoina hoe amortissement.
Raha tsy mikajy io amortissement io izany, dia ho simba ny fitaovana, nefa tsy nisy vola natokana hanavaozana azy. Izay no mahatonga ny mpandrahara, miharatsy foana ny fitaovana ampiasainy, ary mihena ihany koa ny rendement, satria fitaovana efa miha antitra no ampiasaina, na nohanina ilay vola tokony atokana hividianana fitaovana.
Raha 1 million ariary izany ny vidin'ny omby, dia 200 000ariary izany ny vola lany amin'ny omby taom-pamokarana iray.
Toy izany koa ny Hersa - Ragiragy - Angady: Tombanana ho 200 000ar ny fitaovana, ka 40 000ariary izany ny vidin'ny fitaovana na hofan'ny fitaovana taom-pambolena iray.
Tombanana mahalany 100 000ariary ny fitotoam-bary sy ny kojakoja.
Rehefa totaliana izany ny fandaniana rehetra na ny Masonkarena:
- Akora ilaina: 163 000 ariary
- Mpiasa: 630 000 ariary
- Fitaovana: 240 000 ariary
- Fitotoam-bary: 100 000 ariary
Totalin'ny Masonkarena amin'ny fambolena vary 1ha: 1 133 000 ariary
Vary akotry 1kg manome vary fotsy 600g, na vary akotry 1tonne manome vary fotsy 600kg, ka raha mahavokatra vary akotry 2tonnes izany ny 1ha, dia manome vary fotsy 1200Kg, na 1.2 tonnes.
Ka raha 1000 ariary no andraisan'ny mpanangom-bokatra ny kg vary fotsy, dia:
Vidim-bary= 1 200 kg * 1000 ariary = 1 200 000 ariary.
Ny Masonkarena anefa 1 133 000 ariary
Tombom-barotra = 1 200 000 ariary - 1 133 000 ariary = 67 000 ariary ao anatin'ny taona iray.
Raha toa ka tsy nahatratra 2tonnes izany ny rendement, na ny voka-bary isaky ny hekitara fa 1tonne fotsiny, dia fatiantoka tateraka ny an'ilay mpamboly.
Tsy mbola tafiditra amin'io ny zana-bolan'ny banky na ny micro crédit raha nitrosa, tsy ao anatiny ihany koa ny hetra sy redevance fanjakana sy ny kaominina.